Jawaari :Raiisal Wasaare C/weli wuu ka maarmay in kulankii maanta uu Baarlamaanka horyimaado - iftineducation.com
Jawaari :Raiisal Wasaare C/weli wuu ka maarmay in kulankii maanta uu Baarlamaanka horyimaado
iftineducation.com – Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Somaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa waxa uu sheegay in Ra’iisal Wasaare C/weli Sheekh Axmed Maxamed, uu ka maarmay in kulankii maanta uu Baarlamaanka horyimaado.
“Ra’iisal Wasaare C/weli wuu ka maarmay in kulankii maanta uu Baarlamaanka horyimaado, Ra’iisal Wasaaraha xaq ayuu u lahaa in kulankii maanta uu yimaado isna difaaco, laakiin wuxuu noo sheegay inuu ka maarmay.” ayuu yiri Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya.
Wuxuu kaloo yiri “3-dii bishaan ayuu warqad inoo soo qoray Ra’iisal Wasaaraha, wuxuuna inoo sheegay maadaama Baarlamaanka ay shaqo badan hortaalo in arrintiisa uu u daayay, isla-markaana uu uu ku kalsoon yahay Baarlamaanka.”
Guddoonka Sare ee Baarlamaanka, ayaa wuxuu maanta diiwaangeliyay Xildhibaanada ka qayb qaadaneysa dooda la xiriirta kalsooni kala noqoshada Xukuumada C/weli Sheekh Axmed.
Maalinta Sabtida, ayaa waxaa lagu wadaa in Xildhibaanada Baarlamaanka ay codka kalsoonida u qaadaan Xukuumada, haddii ay sii shaqayn laheyd iyo haddii kalaba.
Shabaab oo diyaarad laga lee yahay dalka Kenya galabta ku soo riday Gobolka Jubbada Hoose